Ugwetshwe 50 owabulala izithandani | IOL Isolezwe
Ugwetshwe 50 owabulala izithandani
Isolezwe / 13 August 2012, 11:07am /
IGWETSHWE iminyaka ewu-50 indoda elahlwe ngamacala okubulala umzala wayo nengoduso yakhe eyayikhulelwe e-Avoca Hills ngo-Ephreli nyakenye.
Inkantolo enkulu eThekwini ngoLwesihlanu igwebe uZwelihle Hamilton Gumede (33) iminyaka engu-20 ngokubulala umzala wakhe, uMnuz Sbahle Blessing Buthelezi (24), iminyaka emihlanu ngokutholakala nesibhamu nezinhlamvu okungekho emthethweni nodilikajele (okuyiminyaka engu-25) ngokubulala ingoduso kaButhelezi, uNksz Noluthando Zakwe (25) owayeyiphoyisa enezinyanga eziyisikhombisa ekhulelwe.
IJaji elibambile, uKessie Naidu, lithe lezi zigwebo uGumede uzozidonsa kanyekanye.
Kuqhume ihlombe kwaba nenhlokomo, abanye baphakamisa izandla sakubonga, lapho kuhlala khona abebezolalela icala ngesikhathi uNaidu ekhipha lesi sigwebo.
Ekhipha isigwebo uNaidu uthe uGumede akakaze asho lutho ngokwenzeka ngesikhathi edubula abafi.
“Nguwena wedwa umuntu obengasikhanyisela ngokwenzeka kodwa wakhetha ukuzithulela, nokuyilungelo lakho elikumthethosisekelo,” kusho uNaidu.
Uthe uGumede wathenga isibhamu ngo-Ephreli nezithandani zabulawa ngayo le nyanga.
“Abukho ubufakazi obuchazayo ukuthi wawungahlosile ukubulala ngesikhathi uthenga lesi sibhamu kodwa inkantolo izothatha ngokuthi lokhu wawukuhlelile ngoba kungenzeka kanjani ukuthi uthenge isibhamu ngale nyanga bese wenza amacala abucayi ngaso leso sibhamu ngenyanga eyodwa,” kusho uNaidu.
Uthe akukho okukhombisa ukuthi uButhelezi wacasula noma wayeyingozi kuGumede ngesikhathi embulala futhi akukho la kusho khona ukuthi uGumede wake wazama ngezinye izindlela noma yomthetho ukuthola u-R400 000 wakhe nemoto athi kwakuthathwe nguButhelezi.
“Wazithathela izinqumo ngokwakho, wathatha impilo yomuntu omncane obelindele ukuzalwa kwendodakazi yakhe. Ngesikhathi umdubula waqondanisa nesingenhla ngenhloso yokuthi uqede ngaye,” kusho uNaidu.
Uthe inkantolo ibone ukuthi uNksz Zakwe wabulawelwa ukugqiba ubufakazi ngoba wayezoba ngufakazi oqanda ikhanda ukuba wayesindile uma icala selingena enkantolo.
“Ubufakazi bukadokotela bukhomba ukuthi waqale wamdubula ethangeni wabe esemdubula ekhanda isibhamu usibeke esiphundu. Ngesikhathi ubulala uNksz Zakwe awukhiphanga isidumbu sakhe kuphela kodwa nesengane yakhe owayengayibeletha noma kunini,” kuchaza uNaidu.
UNaidu ukhale kakhulu ngokuhluleka kwamaphoyisa enza uphenyo ezindaweni okwenzeke kuzo lezi zigameko.
“Ukube uGumede akazivumelanga amacala bebungeke bube khona ukufakazi obugcwele ngoba umphenyi wendawo yesigameko, akathathanga amanyela eminwe namasampula egazi kule ndawo. Akanakanga nokuthi isigxobo sikagesi esikule ndawo sasikhanya yini,” kusho uNaidu.
Uthe abaqeqesha amaphoyisa kumele babhekisise ukuthi ukuqeqeshwa kwawo kusezingeni yini ngoba kuzophunyuka abantu abasuke benamacala ngenxa yobufakazi obungahlangani, amaphoyisa engawenzanga ngendlela umsebenzi wawo.